Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee Puntland oo saaka lagu dilay Bossaso & raggii dilkaasi gaystay oo baxsaday. – Radio Daljir
Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee Puntland oo saaka lagu dilay Bossaso & raggii dilkaasi gaystay oo baxsaday.
Bossaso, Dec 05 – Alle ha u naxariistee Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee Puntland ayaa saaka aroortii lagu dilay magaalada Bossaso ee xarunta gobolka Bari xilli uu ka soo baxay masaajid ku dhawaa goobta lagu dilay oo uu ku tukaday salaaddii subux.
Dilka marxuubka ayaa waxaa gaystay rag baskoolado ku hubaysnaa kuwaasi oo aan si rasmi ah loo aqoonsan, baxsadayna markii ay gaysteen falkaasi dilka ah.
Ciidamada amniga Puntland oo wax yar kaddib gaaray halkii dilkaasi ka dhacay ayaan wali gacanta ku dhigin dhagar-qabayaashii falkaasi dilka ah gaystay, hase ahaatee saraakiil amni oo Radio Daljir la hadlay ayaa sheegay in ay ku hawllan yihiin baaritaanno xooggan oo lagu baadi-goobayo raggii dilkaasi gaystay.
Alle ha u naxariistee Doctor-ku, waxaa uu ahaa guddoomiyaha guddi dawladda Puntland ay u xilsaartay soo qaymaynta khasaarihii maaliyadeed ee ka dhashay dabkii baabi?iyey suuqii waynaa ee magaalada Bossaso, kuwaasi oo dhawrkii maalmood ee ugu dambeeyey ku hawlanaa xog-aruurin ku aaddan baaxadda baaba? hantiyeed ee ka dhalatay gubashadii suuqa Bossaso.
Habeenimadii xalayna, waxaa uu qayb wayn ka qaatay Nadwo-diini ah oo lagu qabtay masaajidla Al-rawda ee magaalada Bossaso taasoo looga hadlayey sidii loogu gargaari lahaa dadkii ku cayrtoobay dabkii halakeeyey suuqaasi, halka isla Nadwadaasina ay xambaarsanayd nuxur kale oo dadka looga samir-siinayey hantidii ay waayeen, iyadoo dhinaca kalena ummadda islaamka ah la farayey in ay u diir-naxaan walaalahoda ku fara-bannaanaaday dabkaasi.
Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan waxaa uu ka mid ahaa culimada waaweyn ee sida xooggan looga qaddariyo deegaannada Puntland iyo dhulka kale ee Soomaalida, waxna laga waydiiyo culuumta diinta islaamka iyo cilmiga kale ee maadiga ah, waxaana xubin ka ahaa guddiga sare ee jaamacadda Bariga Afrika, isagoo horayna u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka Jaamacaddaasi.
Dilka marxuumkaan ayaa ku soo beegmaya xilli dawladda Puntland ay ku dhawaaqday qorshe lagu xoojinayo ammaanka deegaannada Puntland iyadoo laga duulayo martigalinta wejiga 2-aad ee shirka wadatashiga Soomaalida kaasoo lagu wado in uu Garowe ka dhaco 15-ka bishaan aynu ku gudo jirno ee December.